कसरी एक डिजाइनर को लागी सही कार्यक्षेत्र हुनु पर्छ क्रिएटिव अनलाइन
मेलिसा पेरोटा | | कलाकारहरू, ग्राफिक डिजाइन
जब मैले ग्राफिक डिजाइन को अध्ययन गर्न छनौट गर्थे, म धेरै उत्साहित थिएँ। एक लामो समय को लागी मसँग काम गर्ने तरिकाको विचारमा आकर्षित भएको थियो यसमा बाँकी रहेका अविश्वसनीय चीजहरूको अलावा। त्यसोभए उनीहरूले सिफारिस गरे कि के अध्ययन गर्ने भनेर छनौट गर्दा उनीहरूले आफ्नो कल्पना गर्नुपर्छ आदर्श कार्यक्षेत्र। एक व्यक्ति आफैलाई त्यहाँ हेर्न कोशिस गर्नु पर्दथ्यो।
मैले कल्पना गरेँ कि यो मेरो कम्प्युटरमा घण्टा बजाउन र संगीत सुन्न को लागी कस्तो आरामदायी वातावरणमा म पढ्न, चित्र बनाउन वा रंग्न सक्दछु र मलाई यो विचार मनपर्दछ। यद्यपि मैले शारीरिक र आर्थिक दुबै किसिमको यस्तो सुविधाहरूको कामको लागि कति खर्च हुन्छ भनेर सोच्न सकेको छैन। जे होस् म यो पेशा एक र एक हजार गुणा बढी छनौट गर्दछु, मँ नयाँ डिजाइनरहरुलाई भन्न चाहान्छु जो आफ्नो बाटो सुरु गर्छन्, के साथ समस्याहरू भेट्टाइनेछ.
यस लेखमा म केहि उल्लेख गर्दछु अपरिहार्य तत्व एक डिजाइनर को कार्यक्षेत्र को लागी र कि तपाइँ लाई अनलाइन स्टोरहरु मा पाउन सक्नुहुन्छ लिभिंगो। सबै भन्दा पहिले, त्यहाँ दुई अत्यावश्यक तत्वहरू छन् जुन हराउन सक्दैन र जसमा म खर्चमा स्किप नगर्न सल्लाह दिन्छु। त्यसो भए म अरूलाई उल्लेख गर्दछु जुन मलाई लाग्छ कि डिजाइनरको काम सजिलो र रमाईलो बनाउनुहोस्।
1 राम्रो कुर्सी
2 एउटा कम्प्युटर जुन उड्छ
4 ग्राफिक ट्याब्लेट
6 धेरै पुस्तकहरूको साथ पुस्तकालय
कुर्सी एक डिजाइनरको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम वस्तुहरू मध्ये एक हो। विशेष गरी ती डिजाइनरहरूको लागि जसले days दिन बसिरहेका वा कहिले कही बढी घण्टा खर्च गर्दछन्।
यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ जब कार्यालय कुर्सी वा आर्मचेयर छनौट गर्दा धेरै पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्नु हो। पहिले, ध्यानमा राख्नुहोस् एर्गोनोमिक्स। यस कारणका लागि, यो ध्यान राख्नुपर्दछ कि तिनीहरूसँग काठको समर्थन क्षेत्रहरू छन्, टाउको समर्थन छ र तिनीहरू दृढ तर सहज छन्।
दोस्रो, यो तपाईंसँग हुनु आवश्यक छ कार्यात्मक र अनुकूलन योग्य डिजाइन। यसको मतलब यो उचाई अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ, या त व्यक्ति को सम्बन्ध मा वा डेस्क को सम्बन्ध मा।
अन्तमा, अनुसार कुर्सी चयन गर्नुहोस् दक्ष सामग्री र रंगहरू। यो सम्झन आवश्यक छ कि यो लगभग हप्ताको हरेक दिन र घण्टाको ठूलो संख्याको लागि प्रयोग हुनेछ। त्यसकारण, यस्तो सामग्री छनौट गर्न स्मार्ट हुनेछ जुन प्रयोगको साथ खराब हुँदैन र सफा गर्न सजिलो हुन्छ, जस्तै छाला। यसका अतिरिक्त, म सँधै गाढा र colored्गको फर्निचर छान्ने सल्लाह दिन्छु, किनकि हल्का रंगहरू धेरै छिटो खस्कन्छन्।
उपरोक्त सबै गुणहरू पूरा गर्ने कुर्सीको स्पष्ट उदाहरण ब्राण्डको यो मोडल हुन सक्छ बेलियानी यद्यपि त्यहाँ अरु धेरै छन् जुन समान ढाँचामा छन्।
म तपाईंलाई हेर्नको लागि ग्राफिक छोड्छु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू काम गर्ने राम्रो कुर्सी छनौट गर्दा वा कम्प्यूटरको अगाडि धेरै घण्टा खर्च:
एउटा कम्प्युटर जुन उड्छ
यो ज्ञात छ कि ग्राफिक डिजाइनरहरू सामान्यतया हुन् एप्पल उत्पादनहरु को प्रशंसक। तर के तपाई सोच्नुहुन्न कि ती सुन्दर र उत्तम डिजाइन गरीएको छ? यी अत्यधिक मूल्य निर्धारण ग्याजेटहरूको लागि हाम्रो भविष्यवाणी तिनीहरूका उत्पादनहरूमा धेरै छ भन्ने तथ्यका कारणले हो "प्रयोगकर्ता मैंत्री"। तसर्थ यो अपरेटिंग प्रणालीले डिजाइनरको कामलाई ठूलो सरलीकृत गर्दछ। कार्य जसमा सामान्यतया अत्यन्त धेरै भारी कामको भार हुन्छ।
यस अर्थमा, डिजाइनर बहु ​​को सामना हेवीवेट प्रोग्रामहरू कम्प्युटरको आवश्यकता छ एकै साथ एक अर्कोको प्रयोगको बीचमा पैतृक बनाउनको लागि सक्षम हुन र कुनै ठूलो प्रयास बिना। यसले कसरी कम्प्युटर बन्द नगरी निरन्तर काम रोक्ने र पुनःसुरु गर्न अनुमति दिँदछ। यो क्षमता निस्सन्देह एक उत्तम हो किनकि यसले हामीलाई अनुमति दिन्छ कार्य प्रवाह प्रवाहित गर्नुहोस्। अर्को तर्फ, यो पनि एक अप्रत्याशित शटडाउन पहिले गरेको काम पुनः प्राप्त गर्ने क्षमता छ।
अवश्य पनि, त्यहाँ धेरै बेफाइदाहरू छन् जुन मूल्यबाट फरक हुन्छन्, थोरै लचिलोपनको माध्यमबाट जुन उनीहरूले प्रयोगकर्तालाई प्रस्ताव गर्दछन्, केहि केसहरूमा हार्डवेयर अपडेट गर्ने असम्भवतामा। थपको रूपमा हामीले पनि थप्नु पर्छ माउस र किबोर्ड यदि हामीले डेस्कटप कम्प्युटर छनौट गरेका छौं। यद्यपि यो अझै पनि बहुसंख्यक डिजाइनरहरू हुन् जसले स्वीकार गर्छन् कि पेशेवरहरू sणात्मक भन्दा बढी छन्। त्यसो भए, आफैलाई सोध्नु लायक छ ... मेरो क्यारियरको यस चरणमा मेरो लागि सब भन्दा कुशल के हो? के मसँग कार्य प्रवाहको आधारमा खर्च उचित छ?
डेस्क एक यस्तो तत्व हो जुन अधिक लचकताको साथ छनौट गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा, तपाइँको छनौटको अनुसार निर्धारित गर्नुपर्दछ सामग्री र रंग बीचको सम्बन्ध। यी तत्वहरूले निर्धारित गर्दछ परावर्तन सूचकांक डेस्कटप हुन सक्छ कि। परावर्तन एक शरीर को वातावरण लाई पुग्ने प्रकाश प्रतिबिम्बित गर्न को क्षमता हो। नतिजा स्वरूप, यस घटनाले प्रयोगकर्ताको दृश्य धारणा र उनीहरूको काम गर्ने क्षमतालाई असर गर्छ, किनकि तिनीहरूले यी तरंगहरू महसुस गर्छन् जुन कष्टप्रद हुन सक्छन्। यसको सम्बन्धमा, आदर्श भनेको म्याट सामग्रीका साथ कार्य तालिका छनौट गर्नु हो जुन वस्तुहरूको चमक र प्रतिबिम्ब घटाउँछ।
डिजाईनरहरू जोसँग धेरै कार्यप्रवाह र यसको मूल्य अभिव्यक्ति छ हाते काम उनीहरूलाई थाहा छ ट्याब्लेट पाउनु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ। आजकल भेक्टोरियसन कम्प्यूटर सफ्टवेयरको प्रयोग अपरिहार्य भएको छ। समस्या यो हो कि यी सामान्यतया कमान्डहरूको साथ प्रयोग गरिन्छ जुन अनुमति दिन्छ सानो इशारा, चूहों जस्तै।
यसको समाधान यो छ कि ग्राफिक ट्याब्लेटहरू देखा पर्‍यो। यी उपकरणहरू हुन् जसले तपाईंलाई भेक्टर प्रोग्रामहरूको प्रयोग सरल बनाउँदछ जुन कामहरू सिर्जना गरेर हात स्ट्रोकको अभिव्यक्ति सुरक्षित गर्नुहोस्। अर्को तर्फ, तिनीहरू पनि अधिक कुशल र परियोजनाहरु को छिटो विकास संग सहयोगी।
म व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्दछु कि संगीत सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व मध्ये एक हो रचनात्मक विकास। कुनै श creative्का बिना, यो कुनै पनि रचनात्मक को लागी उनीहरूको इन्द्रिय उत्तेजित गर्न सक्ने वातावरणमा पर्न आवश्यक छ। विशेष गरी यदि यो एक काम हो जुन एकदम स्थिर हुन्छ जस्तै ग्राफिक डिजाइन। यस कारणका लागि, म विचार गर्न सिफारिस गर्दछु वायरलेस र पोर्टेबल स्पिकरहरू खरीद गर्नुहोस्। यी धेरै व्यावहारिक ग्याजेटहरू हुन् जसले प्रयोगको ठूलो लचिलोपनलाई अनुमति दिन्छ र सामान्यतया उनीहरूको ध्वनि गुणस्तर इष्टतम हुन्छ। यस तरीकाले हामी ठाउँ सेट गर्न र यसलाई अझ रमाइलो ठाउँ बनाउन सक्षम हुनेछौं।
धेरै पुस्तकहरूको साथ पुस्तकालय
सामान्यतया, जो डिजाइनको बारेमा राम्रोसँग जान्दैनन् भनेर मानिन्छ कि हामी के गर्छौं "रेखाचित्र" हो र हामी केहि पनि अध्ययन गर्दैनौं। जे होस् डिजाइन क्यारियरको सैद्धांतिक सामग्री एक ईन्जिनियरिंग क्यारियर को साथ सबै मा तुलना गर्न सकिदैन; यो डिजाइनरको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ विभिन्न क्षेत्रमा विस्तृत ज्ञान। यो हुन्छ किनकि सामान्यतया, यसले काम गर्दछ / र धेरै क्षेत्रहरूमा यसको ज्ञान हुनुपर्दछ।
यस कारणका लागि तपाई सक्षम हुनुपर्दछ लगातार जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् र सही समयमा यसमा फर्कन। थप रूपमा, यसले हाम्रो ग्राहकहरूलाई हामी के भन्छौं त्यसमा बौद्धिकता र जगको थोरै प्रोजेक्ट गर्न चोट पुर्‍याउँदैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » एक डिजाईनरको लागि उत्तम कार्यक्षेत्र कस्तो देखिनु पर्छ?
यो «उत्तम वा आदर्श वर्कस्पेस recommendations को सिफारिशहरू भन्दा उत्पादनहरूमा नोटको अधिक हुन्छ। मैले सोचे कि उनीहरूले डेस्क वरिपरि खाली ठाउँ राख्ने, तपाईंको वरपरका वस्तुहरू न भर्ने, पिउने, पानी, केही बिरुवाहरू राख्ने, डेस्क भएको कुरा गर्ने कुरा गरे पीसी, बाट नि: शुल्क बेकारका फाईलहरू आदि ... मलाई के थाहा छ ... राम्रोसँग।
फ्रुनोलाई जवाफ दिनुहोस्